dadaal xoogan ayaa socda sidii loo xakameeyn lahaa jadeecada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dalaal xoogan ayaa loogu jiraa sidii loo joojin lahaa fiditaanka jadeecada. sawir: Thomas Johansson/TT
dadaal xoogan ayaa socda sidii loo xakameeyn lahaa jadeecada
La daabacay onsdag 3 januari 2018 kl 13.52
Gobollo kale oo dheeraad aha ayaa la tuhun-san in jadeecada Göteborg ka dilaacday gaadhay. Hada waxa socda dadaalka xoogan oo lagu xakameeynayo fiditaanka jadeecada.
Peter Ulleryd oo ah dhakhtarka ka hortaga cuduradda fida ayaa sheegay in ay hada socto isweeydaarsi macluumaad gobolada waddanka oo dhan.
-Dadku sida caadiga ah xiliga ciida kirismaska iyo sanadka cusub waa ay socdaalaan oo la kulmaan ehelkooda iyo saaxiibadood. Dabcan mana joogaan gurigooda oo keli ah.
Waxa socda hada xog-uruurin ku saabsan cida ay la kulmeen dadkan jadeecadu ku dhacday, iyo sidoo kale xog-uruurin ku saabsan in dadkani ay talaal hore u qabeen iyo in kale. Gabadh ka mid ah dadka xanuunka qaba ayaa magaalada Örnsköldsvik kula kulantay 20 qof. Dadkan oo ka dib looga yeedhay goobaha caafimaadika si loo hubiyo in ay qabaan cudurkan iyo inkale.
Ilaa hada 12 qof ayaa jadeecadu ku dhacday. Cisbitaalka Sahlgrenska oo dadkan badankoodu ka shaqeeyaan ayaa sheegay in ay talaalayaan dhamaan shaqaalahooda u baahan talaalka jadeecada. Shaqaalaha cisbitaankan ayaa guud ahaan ah 17 000 oo shaqaale.
Dhowr jeer ayay jadeecadu horey uga dilaacday waddanka Sweden inkasta oo inta badan lagu guuleeysto in la xakameeyo fiditaankeeda. Arrintan ayey Sweden kala siman tahay wadammada kale ee Yurub.
-Sanaddadii ugu danbeeyey dhowr jeer ayey jadeecadu ka dilaacday wadammada badhtamaha Yurub, sida Talyaaniga, Rumeeniya iyo Fransiiska, dhulkaas oo lagu arkay fiditaan baaxad leh oo dhowr jeer dhacay. Maadaama ay wadammadani inagu dhow yihiin, dad badan ayaa u socdaala, taas oo keenaysa in aan halkan ku aragno kiisas cusub.
Dhinaca kale waxa socda talaal la siinayo 54 caruur ku dhashay cisbitaalka Östra Sjukhuset, halkaas oo la ogaaday in mid ka mid ah shaqaalaha uu qabay jadeecada. Caruurta latalaalayo ayaa dhashay 28 ilaa 29 deseember.